भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस मेसिन थन्किँदा बिरामीलाई सास्ती, मर्मतमा छैन मेसुको चासो – Health Post Nepal
२०७६ पुष १८ गते १५:४४
Breaking : ग्रान्डीमा प्रधानमन्त्रीको डायलाइसिस, थप पटक गरेपछि मात्रै डिस्चार्ज गरिने
भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस मेसिन प्रयोगविहीन हुँदा सयौँ मिर्गौलाका बिरामीले मार खेपिरहेका छन् । मर्मत अभावमा लामो समयदेखि अस्पतालका डायलाइसिस मेसिन प्रयोगविहीन थन्किरहेका छन् ।
अस्पतालमा रहेका ४ वटा मेसिनमध्ये २ वटा बिग्रिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मर्मतमा कुनै चासो नदिई थन्क्याएर राखिँदा डायलाइसिस गराउन आउने मिर्गौलाका बिरामीले सास्ती भोगिरहेका छन् । मिर्गौलाका बिरामीलाई सरकारले ठूलो उपचार सुविधा दिएर पनि स्वास्थ्यसंस्थामा उपकरण अभावमा सेवा नपाउँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका र पहुँच कम भएका बिरामी डायलाइसिस नपाएरै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
मिगौलारोगमा कुनै संकेतविनै ठूलो क्षति हुने जोखिम रहन्छ । पछिल्लो समय मिर्गौलारोगको चंगुलमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । झन्डै ९० प्रतिशतसम्म मिर्गौलाको नोक्सानी हुँदासम्म पनि केही संकेत देख्न नसकिने भएकाले यो रोगलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भनिन्छ । मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि मात्रै सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, बिरामी भने अनेक बहानामा आवश्यक सेवाबाट वञ्चित बनिरहेका छन् ।
नेपालगन्जस्थित तत्कालीन भेरी अञ्चल अस्पतालमा पहिलोपटक १२ पुस ०७४ मा निःशुल्क डायलाइसिस सेवाको थालनी गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चारवटा नयाँ मेसिन र चिकित्सकका लागि तालिमको व्यवस्था गरेपछि भेरीमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिएको थियो । अस्पतालमा होमोडायलाइसिस सेवा थालनी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि बिरामीका लागि अझै सेवा सर्वसुलभ बन्न सकेको छैन ।
यसअघि अस्पतालमा करिब एक दशकअघि ल्याइएका डायलाइसिस मेसिन विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा काठमाडौं फिर्ता पठाइएको थियो । दुई वर्षअघि नयाँ मेसिन र तालिमप्राप्त जनशक्ति उपलब्ध भएपछि भेरीमा सेवाको थालनी गरेको डा. पारस श्रेष्ठ बताउँछन् । अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्रबहादुर चन्दको सक्रियतामा डायलाइसिस सेवाको थालनी भएको थियो ।
सेवा सुरु गर्ने समयमा अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. पारसले भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट दुई महिनाको तालिम लिएर आएका थिए । उनीसहित अस्पतालमा कार्यरत तीन नर्सलाई तीन महिनाको र प्राविधिकलाई दुई महिनाको तालिम दिइएको थियो । अस्पताल स्रोतका अनुसार त्यतिवेला चार मेसिनमध्ये तीनवटा सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । एउटा मेसिन आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि भन्दै रिजर्भ राखिएको थियो । मेसु चन्दको पहलमा सुरु भएको सेवा त्यतिवेला बिहान ९ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म सुचारु हुँदै आएको डायलाइसिस युनिटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
मिर्गौलाका बिरामीले सातामा दुईदेखि तीनपटकसम्म डायलाइसिस गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, निःशुल्क प्राप्त हुने सेवा उपकरण अभावमा पाउन नसक्दा लामो समयदेखि बिरामी मर्कामा पर्दै आएका थिए । यद्यपि, विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि भेरीमा सेवा सुरु भएपछि सयौँ विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले लाभ लिँदै आएका छन् । अस्पतालको सम्पर्कमा आएका बिरामीको तथ्यांक संकलन गरी पालो तोकेर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
२ वर्षमा १ हजार ६ सय ५५ ले लिए डायलाइसिस सेवा, बिरामी पालो कुर्न बाध्य तर थन्किएका मेसिन मर्मतमा मेसुको छैन ध्यान
भेरी अस्पतालमा सेवा सुरू भएपछि अहिलेसम्म कुल १ हजार ६ सय ५५ बिरामीले अस्पतालबाट डायलाइसिस सेवा पाइसकेका छन् भने आकस्मिक सेवाअन्तर्गत ९४ जनाले सेवा लिएका छन् । अहिले पनि १३ जनाले नियमित रूपमा डायलाइसिस गराइरहेका छन् । तर, उपकरण अभावमा ५ जना भने पालो कुरेर बस्न बाध्य छन् । बिग्रिएका २ मेसिनलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकेको खण्डमा बिरामीले पालो कुर्नुनपर्ने अस्पतालको भनाइ छ । तर, अस्पतालका मेसु डा. रूपानन्द अधिकारीले मेसिनको मर्मतमा कुनै चासो नदेखाएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
तिहारअघि नै मेसिन मर्मतका लागि प्राविधिक आउने यसअघिका मेसु अधिकारीले बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि मेसिनको मर्मत हुन सकेको छैन । मेसिन बिग्रेको लामो समय बितिसक्दा पनि अस्पताल प्रशासन मौन रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘बिरामीको चाप बढेकोबढ्यै छ, मेसिन बिग्रेका छन् । चलिरहेका दुईमध्ये पनि एउटाले कहिलेकाहीँ काम गर्न छाडेको छ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘मेसिन मर्मत र सुधारका लागि अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन मौन छ ।’
साधन–स्रोत र अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव खेपिरहेको डायलाइसिस युनिटमा भएका पुराना मेसिनसमेत प्रयोगका लागि मर्मत नहुँदा दर्जनौँ बिरामीले अस्पतालबाट सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । डायलाइसिस युनिटमा भएका सबै मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, बिग्रेका मेसिन तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार चिकित्सक तथा अन्य जनशक्तिको दरबन्दीका लागि अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने मिर्गौलारोगीले माग गर्दै आएका छन् ।
डाक्टरको दर्शन पाउनै मुस्किल छ : बिरामी
भेरी अस्पतालमा रहेको हेमोडायलाइसिस युनिटमा डाक्टरको दर्शन पाउनै मुस्किल हुने गरेको बिरामीको गुनासो छ । सो युनिट मेडिकल विभागअन्तर्गत राखिएपछि अस्पतालले मिर्गौलाका बिरामीको अवस्था बुझ्न केही डाक्टरलाई राउन्डमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, युनिटमा राउन्ड चेकजाँचका लागि आउने डाक्टर ढोकाबाटै राउन्ड गरेर फर्किने गरेका छन् । यद्यपि, डा. पारसले भने यसअघि राउन्डमा आएका वेला बिरामीको छेउमा पुगेर अवस्था बुझ्ने गर्दै आएको बिरामीको अनुभव छ । अहिले उनी देशबाहिर भएकाले पनि बिरामीलाई चिकित्सकको मुख देख्न मुस्किल पर्न थालेको छ । यसका कारण मिर्गौलाका बिरामीले चिकित्सकबाट राउन्डको समयमा पाउनुपर्ने सल्लाह–सुझाब, उपचार र परामर्श पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा दैनिक नयाँ बिरामी डायलाइसिसका लागि सम्पर्कमा आउने गरेका छन् ।
अस्पतालका मेसु अधिकारीले बिग्रेका मेसिन मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मेसु अधिकारीले छलफल भइरहेको बताउँदै आएको र काम भने सुरु नै हुन नसक्दा उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट हुने अस्पतालका कर्मचारीको आरोप छ ।
Tags: डायलाइसिस, भेरी प्रादेशिक अस्पताल